प्रेम Archives - Nepali Virals
शब्दमा आधारित भएर गरिएको संग्रह: प्रेम
२५ माघ २०७४, बिहीबार १७:२९	550
सबैलाइ थाह छ फेब्रुअरी १४ तारिख विश्वभरि नै प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाइन्छ । याे प्रेमका दिन हो, आफ्नो माया प्रेम अभिव्यक्त गर्ने दिन हो । युवा मुटुहरू यस दिनका ब्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्ने गर्छन । हरेक प्रेम गर्ने मानिसका लागि यसका अलग्गै महत्व छ । प्रेमीप्रेमिकालाई मनपर्ने उपहार, फूल, कार्ड आदानप्रदान गर्नुका साथै प्रेमको पहिलो प्रस्ताव राख्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा यस दिनलाई लिइन्छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे’का केही रोचक तथ्यहरू भ्यालेन्टाइन डे विश्वभरि नै मनाइन्छ । नेपालमा कहिलेबाट याे मनाउन थालियो भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन । भारतमा भने १९९०का दशकदेखि मनाउन थालिएको पाइन्छ । भ्यालेन्टाइन डेका दिन नेपालमा २ करोड रूपैयाँबराबरको गुलाबका फूल किनबेच हुन्छ । भ्यालेन्टाइन डेका दिनमात्र २ लाख स्टिक गुलाबका फूल बेचिने गरेको छ । रोज डेः भ्यालेन्टाइन डेको पहिलो दिन फेब्रुअरी ७ तारिखबाट सुरु हुन्छ, जसलाई रोज डे भनिन्छ । रोज डेका दिन प्रेमीप्रेमिकाले एकअर्कालाई गुलाबको फूल दिन्छन् । प्रपोप डेः रोज डेको भोलिपल्ट अर्थात फेब्रुअरी ८ का दिन प्रपोप डे मनाइन्छ । प्रपोज डेका दिन आफूले मन पराएका वा मन पराइएकीलाई प्रेम प्रस्ताव राखिन्छ । चकलेट डेः फेब्रुअरी ९ का दिन चकलेट डे मनाइन्छ । यस दिन आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकालाइ चकलेट दिएर प्रेममा मिठास भरिन्छ । टेडी डेः फेब्रुअरी १० का दिन टेडी डे मनाइन्छ । यस दिन प्रेमी वा प्रेमिकालाई विशेष उपहार स्वरुप टेडी बियरका खेलौना उपहार दिइन्छ । प्रमिस डेः फेब्रुअरी ११ का दिन प्रमिस डे मनाइन्छ । यस दिन आफ्नो प्रेम अन्तिम अवस्थासम्म कायम राख्नेछु भनेर आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकासँग विशेष वाचाबन्धन गरिन्छ । हग डेः फेब्रुअरी १२ का दिन हग डे मनाइन्छ । यो भ्यालेन्टाइन डेभन्दा दुई दिनअघि मनाइने यस दिवसका दिन आफ्ना प्रेमीप्रेमिकालाइ अंगालोमा बेरिन्छ । किस डे- फेब्रुअरी १३ का दिन किस डे मनाइन्छ । यस दिन आफ्नी प्रेमी-प्रेमिकालाई चुम्बन गरेर प्रेम व्यक्त गरिन्छ । भ्यालेन्टाइन डे- फेब्रुअरी १४ का यो प्रेमीप्रेमिकाका लागि विशेष सम्झनायोग्य दिनका रूपमा रहोस् भनेर प्रेमका सबै उपायहरू अबलम्बन गरिन्छ । भ्यालेन्टाइन डे सन्त भ्यालेन्टाइनका नाममा मनाइन्छ । सन्त भ्यालेन्टाइन ई. पू. २६९ मा शहिद भएका थिए, उनलाई १४ फेब्रुअरी २६९ दिन फ्लोमिनिया मृत्युदण्ड दिइएको थियो । विश्वको पहिलो भ्यालेन्टाइन कार्ड सन् १५४१ मा पठाइएको थियो । सन्त भ्यालेन्टाइनकाे अवशेष रोमको सेन्ट फ्रेंक्स्ड चर्च र डबलिन (आयरल्यान्ड) को स्ट्रीट कामिलेट …
२२ पुष २०७२, बुधबार १५:५१	11,601